Baahin: Isniin, Mar 05, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Gen. C/llahi S. Samatar oo ugu baaqay xukuumada Puntland in ay diyaariso doorashooyinka 8-da Janaayo, 2013; Dallada suxufiyiinta Puntland ee MAP oo cambaaraysay caburinta & dilalka suxufiyiinta; Jibuuti oo beenisay in askar ka tirsan ciidankeeda ku sugan Muqdisho la dilay. – Radio Daljir
Maarso 5, 2012 12:00 b 0
Saxafi caawa lagu dilay magaalada Gaalkacyo; bilayska oo aan cidna u qaban jariimada